၂၀၂၁ မတ်လ အတွင်းက စစ်ကောင်စီ၏ သတ်ဖြတ်မှုကို ခံခဲ့ရသော မုံရွာခရိုင် ယင်းမာပင်မြို့နယ်မှ. CDM လုပ်နေသည့် အသက် ၂၄နှစ်အရွယ် သစ်တောဝန်ထမ်း ကိုထက်ထွန်းအောင်
By ဧရာဝတီ 8 May 2021
စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ရာထူးကထုတ်ပယ်ခံရသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ချေးငွေပြန် ပေးသွင်းရန် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက တောင်းခံနေပြီး ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်း မရှိက တရားစွဲဆိုရန် ဖိအား ပေးခြိမ်းခြောက်လျှက်ရှိသည်။
ရွေးကောက်ခံ(NLD)အစိုးရလက်ထက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် သက်ရောက်မှုများအား ကုစားရန် အမြဲတမ်းနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ၂ လစာ အတိုးမဲ့ချေးငွေအဖြစ် ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းက အစိုးရကထုတ် ချေးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒါကတော့ တခြားဌာနတွေထက်ကို စစ်ကောင်စီကို ပိုဖားနေတယ်လို့ပဲမြင်တယ်၊ တကယ်ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ မှန်ခဲ့ရင် အာဏာရှင်တိုက်ထုတ်ရာမှာ ကိုယ်တိုင်မပါနိုင်ရင်တောင် ပါဝင်နေတဲ့ ကိုယ့်ဌာနက ဝန်ထမ်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖေးမရမယ့်အစား စစ်ကောင်စီကို ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ပြနေတာပေါ့” ဟု CDM ပြုလုပ်နေသည့် သစ်တောဦးစီးအရာရှိတဦးကပြောသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကုစာရေး ၂ လစာ အတိုးမဲ့ချေးငွေသည် ချေးငွေထုတ်ယူချိန်မှ ၆ လအတွင်းပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် မလိုဘဲ ယင်းနောက်ပိုင်းတနှစ်အတွင်း လစဉ်အချိုးကျစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ချေးငွေထုတ်ယူခဲ့ပါက ယခုနှစ် မေလမှစတင်ကာ အချိုးကျပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြေရေးဦးစီးဌာန၏ မေလ ၄ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှ CDM ဝန်ထမ်း ၃၉ ဦးအား ရာထူးကထုတ်ပယ်ကြောင်းနှင့် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ကာလများအတွက် ထုတ်ယူထားသည့်လစာငွေများ ပြန်လည်ပေးသွင်းရန်နှင့် ၂ လစာ အတိုးမဲ့ ချေးငွေအား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေပါ အယူခံလွှာ တင်သွင်းခွင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြန်လည်ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက တရားစွဲဆိုအရေးယူရန် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၁ မတ်လ အတွင်းက စစ်ကောင်စီ၏ သတ်ဖြတ်မှုကို ခံခဲ့ရသော မုံရွာခရိုင် ယင်းမာပင်မြို့နယ်မှ. CDM လုပ်နေသည့် အသက် ၂၄နှစ်အရွယ် သစ်တောဝန်ထမ်း ကိုထက်ထွန်းအောင်၏ ဈာပနပုံ
အဆိုပါ အရေးယူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျေနပ်မှုမရှိပါက အမိန့်ကြော်ငြာစာလက်ခံရသည့်နေမှ ၆ လအတွင်း အယူခံ လွှာ တင်သွင်းနိုင်ကြောင်းလည်း ဆိုထားသည်။
ယင်းအပြင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းကလည်း CDM ပြုလုပ်မှုကြောင့် အရေးယူခံရသည့် ဌာနအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများ အား ၂ လစာချေးငွေအား ပြန်လည်ပေးဆပ်စေရန်နှင့် ပေးဆပ်ခြင်းမရှိပါက တရားစွဲဆိုရန် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်တာဝန်ခံအားလုံးထံ မေလ ၅ ရက်နေ့က အကြောင်းကြားထားသည်။
လက်ရှိတွင် သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်ကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ၌ သစ်တောဌာနမှ ၇ ဦး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစို ပြေရေးဌာနမှ ၃၉ ဦးနှင့် သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဌာနမှ ၂ ဦးတို့ အရေးယူခံရကြောင်း သိရပြီး ထပ်မံ၍ အရေးယူခံရမည့် CDM ဝန် ထမ်းများလည်း ရှိလာနိုင်သေးကြောင်း သစ်တောဌာန CDM ဝန်ထမ်းများထံမှ သိရသည်။
ဌာန၏ အရေးယူမှုတွင် ဝန်ထမ်းမှအဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်သည်အထိ အရေးယူမှုများလည်းပါဝင်ပြီး ဌာနအနေဖြင့် ပြည်ပရောက် ပညာတော်သင်များအပေါ်တွင်လည်း CDM ပါဝင်ခြင်းရှိ/မရှိ မေးမြန်းမှုများရှိသည့်အပြင် မိသားစု များမှတဆင့်လည်း ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက်မှုများရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဒီအဆင့်ထိ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို CDM မှာပါဝင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးက တွေးထားပြီးသားပါ၊ ဘာမှ တုန်လှုပ်တာ မရှိတဲ့အပြင် ဒီလိုအရေးယူတဲ့စာကို စောင့်နေကြတာပါ၊ ဒါက ကျနော်တို့ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ အမှုမထမ်းချင်ဘူးဆိုတာ သက်သေပါပဲ” ဟု CDM သစ်တောဦးစီးအရာရှိက ပြောသည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့သစ် လုပ်ငန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြေရေးဦးစီး ဌာန၊ သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတို့မှ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း ၆၅၀၀ ဦးခန့်က CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသော်လည်း ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် အခက်အခဲများကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်ဝင်သွားသူများလည်းရှိကြောင်း CDM ဝန်ထမ်းများထံက သိရသည်
Topics: CDM, ချေးငွေ, သစ်တော